होमपेज / नागरिक शनिबार / टाइमलाइनमा के भइरहेको छ!
टाइमलाइनमा के भइरहेको छ!	29 Jun 2013 १५ असार, २०७०
ट्वीटरमा प्रख्यात काकाबासँग यसको 'नशा'बारे गफ भयो। उनले विदेशमा रहेका एक भतिजको ट्वीटर–नशा सुनाए। ट्वीटर चलाउनै नजान्ने भतिज नेपालका साथीलाई सोधीसोधी ट्वीटरमा अभयस्तमात्रै भएनन्, लतै लागेछ। 'अब त अति भयो,' श्रीमतीले प्रस्ताव तेर्स्याइन्, 'कि ट्वीटर छोड्नूस, कि मलाई।' भतिजका कुरासँगै उनले आफ्ना कुरा पनि निकाले। फेसबुकमा सीमित काकाबा पनि साथीहरूकै कारण ट्वीटरमा आइपुगे। सुरुमा त के हो! के हो! जस्तो लाग्यो उनलाई। फोटो पनि छैन। च्याट गर्न पनि नमिल्ने। बिस्तारै बानी पर्‍यो। काकाबाकी श्रीमती हिरा न्यौपाने भन्छिन्, 'अहिले त म पनि ट्वीटर हेर्न थालेकी छु।' पछिल्लो समय सहरिया युवा ट्वीटरमा झुम्मिएका छन्। कतिलाई 'लत'जत्तिकै भइसक्यो। उठेदेखि नसुत्दासम्म टाइमलाइनमा स्क्रल घुमाउनैपर्ने भएको छ। 'टाइमलाइनमा के भयो होला भन्ने लागिरहन्छ,' प्रमोद न्यौपानेले भने, 'ट्वीटर त एडिक्सनजस्तै भइसक्यो।' प्रविधि र मोबाइलको सुविधाले अफिस, बाटो, गाडी, घर जहाँबाट पनि ट्वीटरलाई साथी बनाउन सकिने भएको छ।ट्वीटर यसरी झाँगिदै छ, जसको प्रभावले समाज, राजनीति, कला, फिल्म, पुस्तकको व्यापारमा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ। समाजिक कार्यक्रम, नेता र राजनीति विषय, फिल्म र पुस्तक समीक्षासमेत ट्वीटरमा हुन थालेका छन्। नेपालमा ट्वीटरको प्रयोगलाई ठूलो समूहमा ल्याउन भूमिका खेल्ने आकार अनिल भन्छन्, 'आफ्नो प्रोफेसनमा सफल हुन ट्वीटरले सहयोग गर्न सक्छ।' इन्जिनियर, डाक्टर, पत्रकार, नेतादेखि हरेक क्षेत्रका व्यक्ति ट्वीटरमा जोडिएका छन्। चुनावको प्रचार ट्वीटर/फेसबुकबाट पनि गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले बताइसकेको छ। आफ्ना लेख रचना, ब्लग, न्युज पोर्टलको प्रचारसमेत ट्वीटरमा हुन थालेको छ। ट्वीटर सुरु भएको तीन वर्षपछि २००८ देखि आकार अनिलले ट्वीटर चलाउन थाले। 'त्यत्तिखेर ट्वीटरको सर्कलमा २०–२५ जनामात्र साथी थिए होलान्,' आकारले भने, 'उनीहरू इन्जिनियर र आइटी सेक्टरका मात्रै थिए।'२०१० तिर बलिउडका सेलिब्रिटी ट्वीटरमा प्रवेश गरेसँगै यसको लोकप्रियता बढ्यो। उनीहरूका ट्वीटबारे सञ्चारमाध्यमले विशेष महŒव दिए। यसले सेलिब्रिटीका नेपाली फ्यानहरू ट्वीटरतर्फ तानिए। ब्रायन एडम्स्को नेपाल प्रवेशपछि ट्वीटरमा नेपाली थपिएको आकार बताउँछन्। ब्रायन नेपाल आउनुअघि उनका ट्वीटबारे चर्चा हुन थाल्यो। फ्यानहरूले धमाधम ब्रायनलाई फलो गर्न थाले। पत्रकारहरूले ट्वीटर प्रयोग गर्न थालेपछि भने यसले अझ विस्तार पायो। युवाहरू मात्रै होइन तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको ट्वीटर प्रवेशले ठूलै हल्ला मच्चायो। उनको ट्वीटर मोहलाई मिडियाले चासोका साथ प्रचार गरे। उनकै लहलहैमा राजनीतिक कार्यकर्ता पनि टि्वटरमा प्रवेश गरे। ट्वीटरमा ठूलो समूह निर्माण हुदैछ। कुलरिम्स (सुवासकुमार कोइराला) ट्वीटरलाई एउटा ठूलो परिवारजत्तिकै ठान्छन्। ट्वीटरका युवा टाइमलाइनमा मात्र सीमित छैनन्। उनीहरू आइडिया सेयर गर्छन्, सँगै बसेर चिया पिउँछन्, जन्मदिन मनाउँछन्। ट्वीटरलाई माध्यम बनाएर सामाजिक काममा पनि जुट्छन्। टिएफसी नेपाल @tfcNepalठूलो समूह ट्वीटरमा व्यस्त हुन थालेपछि साथीहरूसँग भेटघाट र सामाजिक कार्य गर्न केही ट्वीटर प्रयोगकर्ता जोसिए। समूह निर्माण गरे, 'टिएफसी नेपाल'। उनीहरू यसलाई 'लुज नेटवर्क' भन्न रुचाउँछन्।दुई वर्षअघिको यो प्रयासले अहिले धेरै युवालाई समेटेको छ। सुरुमा प्रमोद, इश र आकारले ट्वीटमार्फत् भेटघाटका लागि आह्वान गरेपछि २०११ मार्चमा केही युवा भेला भए। भृकुटीमण्डपमा १४ जना साथीहरू भेला भएपछि सामाजिक कामबारे सोच बनेको प्रमोद बताउँछन्। सामाजिक कामका लागि नै उनीहरूले टिएफसी नेपाल हेन्डल खोले। यही हेन्डलमार्फत् साथीहरू थपिए। टिएफसीमार्फत् नै योजना बन्छ। आफूसक्दो पैसा जुटाउँछन्। त्यसलाई आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्छन्। अहिलेसम्म १० वटा मिसन (सहयोग) सकिसकेको प्रमोद बताउँछन्। ४ हजारभन्दा धेरै फलोअर रहेको टिएफसी नेपालमा ६०–७० युवा धेरै सक्रिय छन्।पवित्र समाज सेवा नेपाल हुँदै यो मिसन केन्द्रीय बालमन्दिरका बच्चालाई लिटो खुवाउने सहयोगसम्म आइपुगेको छ। निस्वार्थ जुटेको पैसाबाट सयौं बालबालिकाले सहयोग पाएको अभियानका युवाहरू बताउँछन्। हरेक मिसनमा करिब ५०–६० हजार रुपैयाँ संकलन हुने प्रमोदले बताए। सक्रिय सदस्यले हरेक महिना हजार रुपैयाँ टिएफसी नेपालका लागि जम्मा गर्छन्। कोही छोराछोरीको जन्मदिनको अवसरमा आर्थिक सहयोग गर्छन्। आफूहरूप्रतिको विश्वासले सहयोग जुटिरहेको उनीहरूको भनाइ छ। संकलित सहयोग रकम र खर्च विवरण टिएफसीको साइटमा राख्ने गरिएको छ। ११ औं मिसनमा गाईघाटको एक स्कुल परेको छ। त्यसैको सहयोगमा उनीहरू सक्रिय बनेका छन्। ट्वीटरमा चर्चित आइब्लड काठमाडौं @ibloodnepal का युवा पनि सामाजिक सेवामा जुटेका छन्। कसैलाई रगत चाहियो भने ट्वीट गर्नेबित्तिकै उनीहरू सहयोगमा लागिहाल्छन्। क्याफे कविता @CafeKavita­कविताले नै कहिलेकाहीँ टाइमलाइन भरिन्छ। जान्नेहरू राम्रै लेख्छन्, नजान्ने प्रयास गर्छन्। कविता–प्रेमलाई सम्बोधन गर्दै ट्वीटरमा क्याफे कविताको हेन्डल बनेको छ। ६ महिनाअघिदेखि सुरु क्याफे कविता ट्वीटे युवाबीच लोकप्रिय छ। 'मिन पचास'बारे कविता सुनाउन बनेको सोच नै क्याफे कवितासम्म पुग्यो। सुरुमा रूपेश श्रेष्ठ, कमल कुमार, जोतारे धाइबा र जनक पौडेल थिए। हरेक महिना कविता सुनाउने सल्लाहअनुसार नयाँ नाम जुर्‍यो, 'क्याफे कविता'। क्याफेमा बस्ने कविता सुनाउने। काठमाडौंमा तीनपटक कविता सुनाइसकेको क्याफे कविता इटहरीसम्म पुग्यो। 'युवाहरूमा राम्रो प्रभाव जमाएको छ,' रूपेश भन्छन्, 'फरक खालको कविता गोष्ठी नयाँ प्रतिभाका लागि प्लेटफर्म बनेको छ।' कविता वाचनसँग भिडियो लाइभ पनि हुन्छ। बेला–बेला एफएमले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छन्। आज सोसल मिडिया डेआज शनिबार 'सोसियल मिडिया मिटअप २०१३' हुँदै छ। ३० जुनमा यो दिवस विश्वभर मनाइन्छ। विश्वमा भइरहेको प्रविधि–क्रान्तिबारे जानकारी दिने उद्देश्यले काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्न लागिएको आयोजक आकार अनिलले बताए। किङस् कलेज, बिजुलीबजारमा साढे १२ बजेदेखि कार्यक्रम हुँदै छ। 'सोसियल मिडिया इज गुड' विषयमा मार्केटिङ, पत्रकारिता, शिक्षा, साहित्य, फिल्म, संगीत, खेलकुद क्षेत्रका जानकारले आफ्नो प्रस्तुति राख्नेछन्। विश्वमा २०१० देखि मनाउन थालिएको यो दिवस मासएवलले सुरु गरेको हो। नेपालमा भने दुई वर्षदेखि आकारकै आयोजनामा 'सोसियल मिडिया डे' आयोजना हुन्छ। ट्विटेहरु के भन्छन्
आकार अनिल, इन्जिनियर @aakarpostट्वीट : ६३ हजारभन्दा धेरैमैले ट्वीटर सुरु गर्दा सीमित साथीमात्र थिए। अहिले ठूलो मास बनिसकेको छ। पहिले धेरै विषयमा ट्वीट गरिरहन्थें, अहिले कम भएको छ। म सोसल मिडिया, गुगल, आइटी, ग्याजेटसँग सम्बन्धित विषयमा ट्वीट गर्छु। आफू आबद्ध क्षेत्रसँग सम्बन्धित ट्वीट गर्दा राम्रो हुन्छ। यसले आफ्नो प्रोफेसनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। आफ्ना गुरुहरूसँग चिनजान हुन र प्रतिभा देखाउने माध्यमका रूपमा ट्वीटर प्रभावकारी बन्दै गएको छ। हरि न्यौपाने, रेडिमेट व्यापार @KakaBaaट्वीट : ५५ हजारभन्दा धेरैमलाई साथीहरूले तानेर नै ट्वीटरमा ल्याएका हुन्। पहिले फेसबुक चलाउँथे। फेसबुकका साथी आकारले नै मलाई ट्वीटरसम्म पुर्‍याएका हुन्। फेसबुकमा उनी काका भन्थे। म उनलाई भतिज भन्थंे। पछि ट्वीटरको हेन्डल नै काकाबा राखें। ट्वीटर साथीजस्तै बनेको छ। बेला–बेला ट्वीटर चलाउँदा रिसाउने श्रीमती नै ट्वीटर चलाउन थालिन्। ट्वीट निश्चित विषयमा हुन्छ भन्ने छैन। टाइमलाइन हेर्दै जाँदा साथीहरू जताजता लाग्छन्, म पनि त्यत्तै लाग्छु। क्रिएटिभ र बौद्धिक ट्वीटले धेरै जानकारी दिन्छ। जनकराज भट्ट, आइटी टेन्निसियन @Jaw_Knockट्वीट : ५० हजारभन्दा धेरैमनमा जे आउँछ, त्यही ट्वीट गर्छु। कसैकसैले क्लिष्ट भाषामा ट्वीट गर्छन्। मलाई त्यो मन पर्दैन। ट्वीटर अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र माध्यम पनि हो। जे लेखे पनि त्यसमा हिचकिचाउनु पर्दैन। क्रिकेट र सामाजिक सन्दर्भ मेरा ट्वीटका विषय हुन्। विभिन्न न्युज पोर्टलको लिंक पनि सेयर गर्छु । ट्वीट गर्नलाई समय निकाल्नुपर्छ भन्ने छैन। कहिले हिँड्दा–हिँड्दै पनि गरिन्छ। ट्वीटमा विभिन्न विषय उठिरहेका हुन्छन्। वादविवाद हुन्छ। कुनै निश्चित निर्णय पनि निस्कन्छ। सुवासकुमार कोइराला @cooolrimsट्वीट : ४० हजारभन्दा धेरैट्वीटरको साथी पुजारीले नै मलाई सिकाएको थियो। अहिले त ट्वीटर नभई नहुने भइसक्यो। यतिसम्म कि, ट्वाइलेट जान छोडेर पनि 'रिप्लाई' दिन मन लागिरहेको हुन्छ। राति निद्रा खुल्यो कि ट्वीट गर्ने चाहना हुन्छ।काम सँगसँगै ट्वीट पनि गरिहरेको हुन्छ। टाइम पास र महŒवपूर्ण कुरा न्युज अपडेट छिटोछिटो भइरहेको हुन्छ। नयाँ साथी बनाउन पाइन्छ। अरूलाई बु‰न पाइन्छ। प्रमोद न्यौपाने, इन्जिनियर @friendycalls ट्वीट : २६ हजारभन्दा धेरैट्वीटर एडिक्सनजस्तै भइसक्यो। बिहान उठेदेखि नसुतुन्जेल ट्वीटरसँगै हुन्छ’। समसामयिक विषयमा ट्वीट गर्न रुचाउँछु। टाइमलाइनमा उठेका विषयअनुसार पनि पनि ट्वीट गर्छु। म फ्रिल्यान्सर भएकाले अफिसको काममा असर गर्ला भन्ने हुँदैन। ट्वीटरबाट टाढा भएका बेला टाइमलाइनमा के भइरहेको होला भन्ने लागिरहन्छ।	Tweet Leaveacomment Message *
सिंगापुरमा १२ लाखहामी दिनभर पसलमा बस्छौं। एकनासको दिनचर्याले बोर हुन्छ। त्यसैले बेलाबेला घुम्न जान्छौं। रात बस्न कहिले नगरकोट, कहिले धुलिखेल पुग्छौं। वर्षको एकपटक दसैं मानेर नेपालभित्र घुम्छौं। तीन वर्षमा एकचोटि विदेश जान्छौं।	राजनीतिक दुदर्शाको चित्र‘सरकारी मार्क्सवादी'हरूका पाखण्डलाई खिल्ली उडाउँदै बेलाबेला वैचारिक विमर्शमा उभिने आख्यानकार नारायण ढकाल नेपाली आख्यान–लेखनको प्रगतिशील वृत्तमा स्थापित एक विरासत हुन्।	भर्‍याङनाम पनि कति आधुनिक राख्न भ्याएछन्, उसका बाबुआमाले! लक्की। पूरा नाम– लक्की उपाध्याय। ‘मेरा बाबु सामान्य लेखपढ गर्न जान्दछन्। आमालाई त कालो अक्षर भैंसीबराबर!' एक दिन उसले मसँग भनेकी थिई।‘त्यसो...	किन फेरिएन कर्णाली?सुर्खेत- दुई दशकअघिसम्म जुम्ला, खलंगाका रामकृष्ण बुडथापा आफ्नै खेतबारीमा उब्जेको अन्न खान्थे। उनको दुई रोपनी जग्गामा वार्षिक सरदर १० क्विन्टल धान, मकै, गहुँ, जौ, फापर फल्थ्यो। पौष्टिक आहारयुक्त खानाले स्वास्थ्य...	अघिल्लो दशकको दस्तावेजरामेश कोइरालाले ‘आमाको मुटु' लेखेर मुटुभित्रका आरोह–अवरोहलाई शब्दमा उनेका थिए। यसपटक भने समाजको एक हृदयविदारक अनि दुःखद आयामलाई औपन्यासिक कृतिमा बटुलेका छन्।	प्याराडक्स जिन्दगीहिउँद्को कुनै महिनाको एक साँझ।नयाँ सडक पीपलबोटछेउको भीड।गजलकार ललिजन रावलले परिचय गराइदिए– उहाँ विप्लव ढकाल, घर भोजपुर, हाल काठमाडौँ। अनि उहाँचाहिँ राजेन्द्र पराजुली, कोटेश्वर, काठमाडौँ। त्यसबखत रचनाको मुन्तिर ठेगाना लेख्ने...	जाडो बिदामा लुम्बिनीजाडो बिदामा विद्यार्थीलाई घुमाउनैपर्ने एउटा ठाउँ हो लुम्बिनी। विश्व शान्तिदूत गौतम बुद्धको जन्मथलो। किताबमा पढेका कुरा त्यहाँ पुगेर हेर्दा विद्यार्थी रमाउँछन्। त्यसैले अभिभावकले उनीहरूलाई त्यहाँ घुमाउनुपर्छ।	बाँच्न जान्दछ नेपालीआफ्नै बारीको काउली र आलु तेल, नुन–बेसार र खुर्सानी हालेर पर्परी भुटिरहेकी उनी सामुन्ने नौला मान्छे देख्नासाथ सल्बलाइन्। झटपट पाहुनालाई सत्कार गर्न तम्सिइन् अनि हामीलाई बस्न र खाना खाएर मात्र...	नागरिक शनिबार	एउटा पुरानो छापामार'हान्ने राँगोजस्तै भएर आइस् नि? आँखा पनि राता न राता छन्! के भो तँलाई ए शंकर?'फलैँचामा...	दुइटा नाक भएका मान्छेम उनलाई सम्झाइरहेको थिएँ, छोरीको बिहामा फजुल खर्च गर्नु हुन्न।मेरो कुरामा सहमति जनाउँदै ती वुज्रुगले भने,...	मेरो रंगयात्रामा सर्वनामतीस–एकतीस सालतिरको धनकुटा। गोकुण्डेश्वर हाइस्कुलको सानो हलमा नियमित नाटक मञ्चन गर्थ्यौं। टिकटमा नाटक मञ्चन हुने परम्परा...	भाषिक अव्यवस्थाकुनै गलत कुरालाई धेरै पटक दोहोर्यािएर सत्य प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रयासमा कतिपय मानिस लागिरहेका हुन्छन्। यहाँ...	भर्खरै...